YouTube ma lacag buu ka helaa muuqaallada dawooyinka beenta ah ee Kansarka? - BBC News Somali
YouTube ma lacag buu ka helaa muuqaallada dawooyinka beenta ah ee Kansarka?
BBC-da ayaa baadhitaan ku ogaatay in sharikadda YouTube-ku ay lacag ka samayso xayaysiis lagu sameeyo daawooyin been abuur ah oo Kansarka loo icticmaalo, kuwaas oo la baahiyey ayadoo la adeegsano luuqado dhowr ah. Muuqaaladaan ayaa la sheegay in ay yihiin kuwo dadka marin habaabinaya caafimaad ahaan.
Ayadoo muuqaaladaas laga baarayo YouTube-ka lana adeegsanayo 10 luuqadood, ayaa BBC-du waxay ogaatay in muuqaallo 80 kor u dhaafaya oo bartaas lagu baahiyey ay xambaarsan yihiin marin habaabin caafimaad oo dhanka daawooyinka kansarka ah.
Toban ka mid ah muuqaalladaas ayaa la ogaaday in ay daawadeen dad ka badan hal milyan oo qof.
Daawooyin aan la "xaqiijin" ayaa badanaa lagu soo qaatay muuqalladaan, ayadoo la adeegsanayo walxo gooni ah, sida fixisada, cabbitaanno iyo sidoo kale in qofku cuntada si aad ah uga soomo.
"Malaayiin doolar ayaan sameeyaa anigoo raashin ku cunaya YouTube"
DanTDM oo noqday taajirka 2017 ee dadka YouTube-ka ku shaqaysta
Qaar ka mid ah dadka YouTube-ka ka shaqaysta ayaa muuqalladooda ku sheegay in la cabbo caanaha dameeraha iyo biyo karkarsan. Laakiin ma jiraan wax ka mid ah daawooyinkaas oo caafimaad ahaan la xaqiijiyey in kansarka lagu daaweeyo.
Hannaanka xayaysiinta ee YouTube ayaa saamaxaya in sharikaddaas ay Google-ku leedahay iyo qofka Muuqaalka sameeyeyba ay lacag ka samaynayaan muuqalladaas.
Bishii Janaayo, YouTube-ka ayaa sheegay in ay "yaraynayaan talooyinka marin habaabinaya dadka bartaas adeegsada- sida muuqaallada sheegaya daawooyin lagula tacaalo cudurada halista ah."
Baadhitaanka ayaa lagu sameeyey luuqadaha Ingiriiska, Portuguese-ka, Russian-ka, Carabiga, Faarisiga, Hindiga, Jarmalka, Ukrainian-ka, Faransiiska iyo Talyaaniga .
BBC-da ayaa ogaatay, Tusaale ahaan afka Ruushka, markii lagu baaro muuqaalladan been abuurka ah ee la sheegay in Kansarka lagu daaweeyo ay ku jiraan talooyin dadka lagu siinayo in la cabbo faxisada. Muuqalladaas marka la daawado waxaa ku jira talooyin ku saabsan "daawooyin " aan caafimaad ahaan la xaqiijijn sida in la cabbo cabitaanka laga shiiday dabacasaha(karootada) iyo in si xad dhaaf ah loo soomo.